↑ ညောင်ဦးခရိုင်. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး. Archived from the original on 2017-10-09။ Retrieved on ၁၁ မေ ၂၀၁၅။
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ9ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:29